ကျနော်တို့လူ့အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲဝင်! ∴ www.PixelHELPER.org အားဖြင့်
သင့်မှာပြaနာရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင် PixelHELPER ကိုရှာပါ
မော်ရိုကိုရှိ နာဇီအာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် မေ့ပျောက်နေသော LGBT များအတွက် Holocaust Memorial Marrakech မော်ရိုကို၏ LGBT ဆန့်ကျင်ရေးအစိုးရ၏ ဖျက်ဆီးမှု။
PixelHELPER မှ တွိတ်များ
pixel ကူညီ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိပါတယ် လူ့အခွင့်အရေးအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့်အနုပညာရှင်ကွန်ယက် မကျြနှာကိုမှ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုနှင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့် စစ်တိုက်ခြင်းငှါ။ ကျနော်တို့အနုပညာနှင့်အတူချင်တယ် အရေးကြီးသောလူမှုရေးကိစ္စများ ထောက်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းလည်ပတ်သည် အာဖရိကရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီစီမံကိန်းများ။ ကိုယ်ပိုင် စည်သွတ်ပေါင်မုန့်ကိတ်မုန့် တိုးမြှင့်ဖို့ထုတ်လုပ်ရန် စားနပ်ရိက္ခာတည်ငြိမ်မှု အတွက် ဒုက္ခသည်စခန်း, ပregionsိပက္ခဒေသများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ သံဗူးထဲမှာကြာရှည်ခံမုန့်။ ကျနော်တို့တိုးပွားလာလျက်ရှိသည် အာဖရိကရှိစားနပ်ရိက္ခာတည်ငြိမ်မှု။ areaရိယာ၌ အရေးပေါ်အကူအညီ PixelHELPER သည်အာဖရိကရှိစည်သွတ်ပေါင်မုန့်စက်ရုံများနှင့်နီးကပ်စွာကြိုးစားနေသည် UNHCR ဒုက္ခသည်စခန်းများ လက်ကိုင်ကွန်တိန်နာဆေးရုံငယ်များဖွင့်လှစ်ရန်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါ menu ကို item လှူဒါန်းပါ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း၏လုပျငနျးကိုထောကျပံ့။
Angela Merkel က Julian Assange ကိုနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေး ဗွီဒီယိုအနုပညာကာတွန်း
ဟာသသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးသည်! နေသမျှကာလပတ်လုံးငါတို့ကဲ့သို့ လူသား,Liebe နှင့် ဟာသ ချိတ်ဆက်ပါ၊ ငါတို့ဘာအရေးမကြီးဘူး ခွာ, ဟာသကသူတို့ကိုအားပေးတယ် သည်းခံနေခြင်း, စင်ကြယ်သောအတွက်ရွှင်လန်းသည်းခံစိတ် ဟာသအခမဲ့အရွယ်အစား ပုဂ္ဂိုလ် ၏စစ်မှန်သောရည်မှန်းချက်တရားမျှတဖြစ်ပါတယ် လူထု ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သောဘုရင်၏ဂျာမန်ထိုင်ခုံဟိုတယ် Sonnenbichl တွင်အလင်းရောင်အလင်းတန်း
ငါတို့မှတဆင့် အနုပညာအလုပ် ငါတို့သည်ဤလောကတစ်အောင် ပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ် နှင့်ဦးတည်သွားစေ ပိုကြီးတဲ့လူမှုရေးအပြောင်းအလဲများ, အလှနျ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူ ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်း၏နာမတော်ကြောင့် သည်းခံနေခြင်း သင့် pixel ကူညီ ယင်းပိုင်ခွင့်တောင်းဆို သည်းမခံ သည်းခံရန်မဟုတ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက်များအတွက်စီမံကိန်းများအပေါ်ဖြစ်ပါတယ် အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့်, လူ့အခွင့်အရေးကို နှင့်ဆန့်ကျင် anti-ဂျူး.
သေဆုံး pixel ကူညီ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အနုပညာရှင်များ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွန်ယက်ကိုတိုက်ထုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းများ ဆန့်ကျင် လူမှုရေးဘေး။ ပါဝင်ဆင်နွှဲသောအနုပညာရှင်များသည်ပြproblemsနာများကိုမီဒီယာအစီရင်ခံခြင်းတွင်အဓိကထားရန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်သရော်စာသုံးကိရိယာများကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ကျနော်တို့အန္တရာယ်မကြောက်မရွံ့, တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ, လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာမြေန်းကျင်စိတ်တွင်မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကမ္ဘာကြီး၏ဆူညံသံများကဒါပေမဲ့တွေဝေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကယုံကြည်ချက်ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးရဲ့အခြေခံမူကနိုင်ငံရေးစျြလြူရှုမှုများအထပ်ထပ်တိုက်ပြန်လည် "လွတ်လပ်မှု, တန်းတူညီမျှမှု, ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား" ဖြစ်ပါတယ်။
ဖျက်ဆီး အဆိုပါအဘိဓါန် Moroccan အစိုးရက Walter Lübckeနံရံ။
Bundestag နိုင်ငံတော်သမ္မတ Wolfgang ကို Schaeuble ကြောင်းပါလီမန်တွင်ပြောကြားခဲ့သည် Lübcke "အများမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပေးသောပြီးနောက် Enter များအတွက်: တငျ့တယျလြောကျပတျခွငျး, သည်းခံစိတ်နဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏။ pixels ကိုကူညီထောကျပံ့အဘယ်ကြောင့်အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကမ္ဘာကခြိမ်းခြောက်နေပါသည်!
PixelHELPER ကိုတည်ထောင်သူသည်ဂျာမနီမှအလင်းရောင်အနုပညာရှင် Oliver Bienkowski ဖြစ်သည်။ အခြားအလင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအနုပညာရှင်များနှင့်ကာတွန်းဆရာများစွာသည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာအတွက် PixelHELPER အတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးဝေး aber ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနောက်ဆုံးတော့များမှာ.
ကျနော်တို့။ တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ် stylist device ကိုအဖြစ်စနစ်တကျမညီကြောင်း
အဆိုပါ pixels ကိုကူညီဘယ်သူနည်း
ရော်ဘင်ဟုဒ် လူတိုင်းသိတယ်။ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား ဓားပြကျင်းပ လေးနက်ရရှိသွားတဲ့ ပြိုင်ဘက်ဘယ်သူ့အကျင့်ကိုဖြစ်နိုင် ကျြောစောသော မူရင်းထက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နှင့်အတူ pixel ကူညီအင်တာနေရှင်နယ် အကြောင်းကိုငြင်းခုန် 70 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုပညာရှင်တွေ တစ်ဘို့ ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးဥရောပရှိချမ်းသာသူများထံမှယူပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပါ။ ကျနော်တို့အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ မိမိအလူအစုအဝေးနှင့်အတူ သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ pixel ကူညီမှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ရှိပါတယ် လူ့အခွင့်အရေးကို ၎င်း၏ဌာနချုပ် အာဖရိကတိုက် တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းငါတို့ကဲ့သို့တိုက်ခိုက်နေနေကြတယ် အဆွေခင်ပွန်းနှင့်ဆင်းရဲသားကိုကာကွယ်သောသူ နှင့်တစ်ဦးအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို ရန်သူ သူတို့သည် ပါဝါ & စည်းစိမ်ဥစ္စာ ဇုရ အလွဲသုံးစားမှုဖိနှိပ်မှု.
"The PixelHELPER ဟာသူတို့ရဲ့လက်ရာတွေနဲ့အတူအနုပညာနှင့်သရော်စာတွေဆီကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တော်လှန်ရေးတည်ဆောက်မှုအပိုင်းကိုပေါင်းထည့်လိုက်တယ်"
ကပြောပါတယ် ဂျာမဏီ Kultur
PixelHELPER သည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအနုပညာတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောတာကတော့အနုပညာကနာကျင်အောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနုပညာကိုလူမှုရေးစိတ်ချမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်အသိဥာဏ်အလင်းပွင့်၏စိတ်တွင်စိတ်ဝင်စားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်အနုပညာဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြည်နယ်တွင်ပဉ္စမမြောက်အာဏာအဖြစ်ပြသသည်။ ထို့ကြောင့်အနုပညာသည်သင်အမှန်တကယ်စွဲကိုင်ထားသည့်မှန်မဟုတ်ဘဲသင်ပုံဖော်သောသံတူဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့လေ့လာပါ။ ကျနော်တို့ကစား။ ကျနော်တို့စိတ်ကူးများဖွံ့ဖြိုး။ ကျနော်တို့မှောငျမိုကျကနေအိုင်ဒီယာရ။ ကျနော်တို့ဆနျ့ကငျြဘကိုသုံးပါ။ ကျနော်တို့ကအံ့မခန်းအောင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပျောက်ကွယ်သွား။ ကျနော်တို့အမြင်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့ဆက်သွယ်မှုစေ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှုထောင့်ပြောင်းလဲသွား။ ကျနော်တို့အရိပ်ထဲတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အလင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ရှာကြ၏။ ကျနော်တို့အဖြေကိုပေးပါ။ ကျနော်တို့မှတ်ချက်ပေးရန်။ ကျနော်တို့ရှုတ်ချ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုအလငျး၏မီးစများ၌၎င်းနှင့်အတူကစား။ ကျနော်တို့ကထွက်သယ်ဆောင်။
ငါတို့သည်ဆိုရမည်ကျနော်တို့ pixels ကိုကူညီများမှာ
Friedrich Schiller က
အဆိုပါ pixel ကူညီ Cube ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့သွားကြ၏။
“ ရက်ပေါင်း ၈၀ အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး” ဗီဒီယိုမှ Rubik's Cube ကိုဖြေရှင်းခြင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာသံသယကိုပြသသည်။ ၎င်းသည် PixelHELPER သည် Android Playstore ရှိ livestream crowdfunding app နှင့်နီးပါးပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးကြည့်ရှုသူအားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။
ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်အများအပြားခြေရာတွေကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်ဘယ်သူ၏လမ်းခရီးသာတခါကူးမယ်, ကြှနျုပျတို့အားဖြင့်ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတို့ရဲ့အကြာတွင်ဘဝကိုအခြားအလှည့်ယူရသေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကအခြားလူမျိုး၏ဘဝအသက်တာ၌။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ရေရှည်အပြုသဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ် pixels ကိုကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှ၏လုပျငနျးအတှကျအဘယ်သူမျှမ သာ. ကြီးမြတ်နျဖိုးထားရှိပါတယ်လိမ့်မည်။
တိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုအတွက်အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံအဖြစ်လူသား။ ဖေ့စ်ဘွတ်ရှိ Emoticons များမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ဖုတ်ကောင်တွင်လူမျိုး၊ အရောင်၊ ဘာသာတရားမရှိဘဲ ဦး နှောက်သာရှိသည်။ “ နယ်နိမိတ်မရှိသောဖုတ်ကောင်များ” စီမံကိန်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်များအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ပြင်ပမှထိန်းချုပ်ထားသောဖုတ်ကောင်ကွန်ပျူတာများမှနာမည်ကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာတိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုမှတဆင့်ကြည့်ရှုသူများ၏အပြန်အလှန်အကူအညီဖြင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်အားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် - ကမ္ဘာပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များမှ ၂၄ နာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း။ စစ်ဇုန်များရှိသတင်းထောက်များနှင့်အတူ၊ Kruger အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများသို့အကူအညီများသို့မဟုတ်အမဲလိုက်ခြင်းကိုဖမ်းဆီးသူများ ကျွန်ုပ်တို့၏ swarm ထိန်းချုပ်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ - Facebook Emoticons များသည်အရန် swarm ကိုထိန်းချုပ်ပြီးဘာလုပ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
နည်းပညာပိုင်းအရဤကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် live stream ကိုပွင့်လင်းမြင်သာသော control element များဖြင့်စတင်ကာသက်ဆိုင်ရာ“ Zombies without border” ၀ န်ထမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ live stream သို့ဖိတ်ခေါ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်သောဒြပ်စင်များ၏ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုကြည့်ပြီးအကျပ်အတည်း၏တည်နေရာရှိတိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုပြောင်းလဲမှုများကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သည်။
pixel ကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှ | Marrakech, မော်ရိုကိုအတွက် app ရဲ့တင်ဆက်မှု
2009 အိုးအိမ်မဲ့များအတွက်မိမိအလုပ် "သင်၏ကိုယ်ပိုင်တော်လှန်ရေး Start" ဟုအဆိုပါ pixels ကိုကူညီစျေးနှုန်း၏တည်ထောင်သူမှ Attac ကိုယ်စားလှယ်ကိုပေး၏။
2013 pixels ကိုအများအပြားဂျာမန်မီဒီယာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်တွင်တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်ဆောင်းပါးနှင့်အတူSüddeutsche Zeitung အပါအဝင်အတွက်လေသောအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ Shit မုန်တိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး, helper စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
2014 10 ငါတို့သည်အမေရိကန်သံရုံးမှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်အတူ NSA က / မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အရှုပ်တော်ပုံအပူနှင့်မီဒီယာများတွင်အပတ်စဉ်ပရိုမိုးရှင်းခေါင်းစဉ်အတူတက်ထားရန်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
2015 ခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာ၏လက်နက်ကုန်သည်အသစ် Oetker Group သည်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသို့အလင်းရောင်ဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအရတစ်နိုင်ငံလုံးသိရှိရသည်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကူညီကမ္ဘာ၏အာဏာရှင်နိုင်ငံများရှိလိင်တူဆက်ဆံ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဆန္ဒပြရန်လိုလားသည့် pixels ကို၏ "မေတ္တာမျှနယ်နိမိတ်သိတယ်" ။ ထိုကဲ့သို့သောအီရန်, နိုင်ဂျီးရီးယား, Mauritania, ဆူဒန်, ယီမင်, ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းတရားမဝင်နှင့်သေခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ပေးသည်အဘယ်မှာရှိအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းနိုင်ငံအများအပြားရှိနေဆဲရှိပါတယ်!
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဘယ်သူမျှမလိင်, အဘယ်သူမျှမပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်ဘာသာရေးသိတယ်! ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဘယ်သူမျှမဘောငျသိတယ်! ကျနော်တို့က "သက်တ မှစ. " ဟုအဆိုပါအလင်းအနုပညာစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, pixel ကူညီပျံ့နှံ့သောဤကြေညာချက်ချင်တယ်။
ဆောင်းရာသီရောက်နေပြီ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့သူတွေငါတို့အကူအညီလိုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက် - လူများကိုဂျာမနီ၏လမ်းများပေါ်တွင်အေးခဲ။ သေစေခြင်းမှကာကွယ်ရန် PixelHELPER အအေးပေးသည့်အရေးပေါ်ဆေးတောင့်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သူများသေသည်အထိလေယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့်ဂျာမန်အရေအတွက်နည်းပါးသည်။ ဂျာမနီမှာလူမှုဖူလုံရေးကွန်ရက်အပြင်ဘက်မှာသန်းတစ်ဝက်ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ရှိတယ်။ အပူချိန်သုညအောက်ရောက်သောအခါလူများကိုတံခါးအပြင်ဘက်သို့ထပ်ခါတလဲလဲစေလွှတ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲစွာသေဆုံးစေနိုင်သည်။ ဂျာမနီမှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှုပြaနာကိုရေရှည်ခိုင်မြဲတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမထားဘူး။ အိုးအိမ်မဲ့များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအစီအစဉ်သည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်လူမှုရေးကင်းမဲ့ခြင်းများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်နေသည်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုအလွယ်တကူရှောင်ရှားနိုင်သောသေခြင်းမှကာကွယ်ရန်အအေးပေးသည့်အရေးပေါ်ဆေးတောင့်များဖြင့်စတင်ခြင်း၊ နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာပြaနာရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင် PixelHELPER ကိုရှာပါ နိုဝင်ဘာလ 15th, 2021အိုလီဗာ Bienkowski
လက်နက်ချခြင်း Android App ဘာရိန်း 13 ဖက်ဒရယ် Chancellery ဖက်ဒရယ်ထောက်လှမ်းရေးဝန်ဆောင်မှု ရောင်စုံထောက်လှမ်းရေးဝန်ဆောင်မှု ခြုံမီး တရုတ်နိုင်ငံ လူအစုအဝေးရန်ပုံငွေ အာဒိုဂန် မီး ညှဉ်းပမ်း freeRaif လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် Hercules လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Catalonia မြေမြှုပ်မိုင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဘယ်သူမျှမနယ်နိမိတ်သိတယ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း တိုက်ရိုက်စီး Stream swarm အကူအညီအသက်ရှင်နေထိုင် Loreley မော်ရိုကို သတ္တုတွင်း da အိမ်တော်၌ NSA က Oberwesel နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ Orlando တွင်အဘို့အသက်တံ့ သံချပ် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ swarm အကူအညီ စပိန်နွေဦး ပီရူလိုင်းနား ဝီဂါ ဥဂါးရ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး လွတ်လပ်ရေး အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ upcycling လက်နက်ကုန်သွယ်မှု ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ scan! စောင့်ကြည့်မှု